Nbudata Easyjet Fleet v1.0 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 108 439
Multiples Auhtors - Lee na ngwugwu
Rikoooo na-eweta ụgbọ mmiri Easyjet ụdị 1.0 maka Fula Simulator X (FSX) SP2 or Acceleration na Prepar3D (P3D) dakọtara na Windows XP / Vista / 7 / 8 +
Nke a ngwugwu na-emi esịnede ọtụtụ ụdị na repaints na provenances nke dere ya, na ndepụta nke ihe ndị edemede bụ dị site na installer. A nnukwu ekele gị ha na-enye anyị àgwà Freeware
Buru akara nke ochie Boeing 737-300 (No VC) gụnyere na ise repaints + zuru 2D Panel
The Boeing 737-700 (na VC) + Advanced kokpiiti site Alrot + wipers
The Airbus A319-111 (na VC) gụnyere atọ repaints gụnyere pụrụ iche na Ngalaba "UNICEF" + Special Pack + A319 V3 +-acha anụnụ anụnụ ikanam, ụgbọelu amalite engines na ọkụ anya, GỤỌ IHE
The Airbus A320-200 (na VC) na atọ repaints gụnyere na 200th mbipụta pụrụ iche oroma + Special Pack + A320 V3 +-acha anụnụ anụnụ ikanam, ụgbọelu amalite engines na ọkụ anya, GỤỌ IHE
Na Easyjet ụgbọ ala na abụọ repaints, ọ pụrụ ọbụna ofufe!
Daalụ ka François Doré maka Airbus mbipụta pụrụ iche V3 A319 / A320 emegharị ka a mkpọ. Nke a na-eme ka Airbus nnọọ ezi uche.
All ugbo elu-ederịta akwụkwọ ozi ndị na ugbu a na-eji Easyjet, iche site Boeing na-adịbeghị anya e wepụrụ nsoro. Ụda nke na engines e jiri nlezianya họrọ na-kwekọọ ezi ihe nlereanya. Gụnyere inwe ezi mmetụta si njem ma ọ bụrụ na mberede.
EasyJet Airline Company Limited (imezi dị ka easyJet; LSE: EZJ) bụ a British ụgbọelu headquartered na London Luton Airport. Ọ bụ kasị ụgbọelu nke United Kingdom, tụrụ dị ka ọnụ ọgụgụ nke ndị nọ rụrụ, na-arụ ọrụ anụ ụlọ na mba na ndokwa ọrụ na-elekọta 600 pụrụ isiwo 32 mba. Ndị nne na nna ụlọ ọrụ, EasyJet plc, na-depụtara na London Stock Exchange na bụ a constituent nke FTSE 100 Index dị ka nke 18 March 2013. Dị ka nke 7 March 2013, na-ewe "ihe karịrị 8,000 ndị", dabere ofụri Europe ma tumadi na UK.
EasyJet hụrụ ngwa ngwa mgbasa ebe ọ bụ na ya oruru na 1995, ebe toro site a zọpụta nke mbụ na isi oghere njọ n'ji ina ala-eri ikuku njem. The ụgbọelu, tinyere enyemaka ụgbọelu EasyJet Switzerland,-arụ ọrụ ugbu n'elu 200 ugbo elu, ukwuu n'ime Airbus A319. Ọ nwere 23 bases gafee Europe, ndị kasị ibu ịbụ Gatwick. Na 2012, EasyJet ji 50 nde njem na bụ nke abụọ-kasị ala-eri ụgbọelu na Europe, n'azụ Ryanair.
EasyJet na-apụta na telivishọn usoro Airline agbasa ozi n'ikuku na ITV nke soro ụgbọelu si arụmọrụ na London Luton na mgbe e mesịrị na ọzọ bases.
Airbus A319 / A320 Serie Special V3 site François Doré: Panel version 3.05 si 24 june 2012
Lee akwụkwọ ntuziaka Airbus A319 V3 na English: https://www.rikoooo.com/images/public/rikoooo-62/EasyJet_Fleet_FSX__P3D/User_manual_PA_319_FD_Special_Version_V3.pdf
Lee akwụkwọ ntuziaka Airbus A320 V3 na English: https://www.rikoooo.com/images/public/rikoooo-62/EasyJet_Fleet_FSX__P3D/User_manual_PA_A320_FD_Special_Version_V3.pdf
Airbus A319 & A320 kokpiiti-acha anụnụ anụnụ ikanam
Onye edemede: Otutu Auhtors - Lee na ngwugwu